Kenya oo heegan gelisay ciidankeeda inta lagu howlan yahay xuska 3sano guurada weerarkii Dusit D2. | Dayniile.com
Home Warkii Kenya oo heegan gelisay ciidankeeda inta lagu howlan yahay xuska 3sano guurada...
Kenya oo heegan gelisay ciidankeeda inta lagu howlan yahay xuska 3sano guurada weerarkii Dusit D2.
Previous articleItoobiya oo Mar kale eedeyn u jeedisay Madaxa hay’adda WHO
Next articleSEIT Koofur Galbeed oo maanta xareynaya Ergada dooraneysa 5-kursi oo Golaha Shacabka ah.
Ciidamada DFS oo degaanno kala wareegay Al-Shabaab hoostaga G/Gedo.
Ciidamo ka tirsan Ururka 49 aad Guutada 10aad Qeybta 43aad ee Ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen degaano...
Laftagareen oo ka qeyb gali doonnaa Shirka uu iclaamiyay Rooble
Maamulka Puntland oo shaacisay jadwalka doorashada 10 Kursi
RW Rooble oo sheegay in Farmaajo Ciidan dul-dhigay Xafiiskiisa